ချောမောသရုပ်ဆောင်များ - အမျိုးသမီးများအတွက်စတိုင်ဖြင့်ဖက်ရှင် | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Alicia tomero | | ယဉျကြေးမှု, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ၏လမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိုပါက၊ ကျော်ကြားရန်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်အပြစ်ကင်းစင်ရမည်။ လှပသောသရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့်အပြင်သူတို့သည်ကြီးကျယ်သောရုပ်ရှင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြပြီးလူများဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်အရည်အချင်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုးတက်အောင်လုပ်လိုသောရည်မှန်းချက်ကြီးသည် ဖန်တီးမှုသဘောထား
သူသည်သရုပ်ဆောင်ကောင်းများသာမကအခြားသူ၏ရုပ်ရှင်များတွင်လည်းထွန်းလင်းတောက်ပသည် သူတို့ရဲ့အယူခံဝင်သူတို့ကိုထူးခြားစေသည်။ ဤအလှပသောသရုပ်ဆောင်များစွာအတွက်ထာဝရလူငယ်၏ elixir သည်များစွာသောသူတို့ကိုစိတ်နာကျင်စေသည်။ အချိန်၏ကျမ်းပိုဒ်သူတို့ခဲ့ထက်အများကြီးပိုအထူးဆွဲဆောင်မှုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
0.2 မက်စီ Iglesias
0.4 Miguel elngel Silvestre
1.1 ဂျေမီ Dornan
1.4 ဟင်နရီ Cavill
1.5 ယာရက် Leto
တစ် ဦး ကချောမော, ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကြော့သရုပ်ဆောင် သူသည်စပိန်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများစွာကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ယနေ့တိုင်အောင်သူ၏နောက်ကွယ်တွင်တောက်ပသောသရုပ်ဆောင်အလုပ်တစ်ခုရှိပြီးသားကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည် ကိုးကိုးကား, Carlota ရဲ့ဒိုင်ယာရီ o လိမ်နှင့်အဆီ.
ကာဒီမှဒီသရုပ်ဆောင် မိမိအထိုးဖောက်အကြည့်နှင့်အတူတစ် ဦး ထက်ပိုသောဖုံးကွယ်ထားရန်သေချာ။ ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကျော်ကြားမှုမှထ ကေလး ထိုအရပ်မှသူသည်အလွန်ကျော်ကြားသောစပိန်စီးရီးနှင့်အတူမရပ်တန့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်နောက်တစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ အနည်းဆုံးကျွန်း နှင့်ယခုနှစ်သူပြီးသားလမ်းပေါ်မှာအများအပြားအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်။
ဘယ်မှညာသို့ - မက်စီအဂဲလီယာစ်စ်၊ ယက်စ်ကတ်စထရို၊ Miguel Ángel Silvestre နှင့် Mario Casas ။
Miguel elngel Silvestre
မီဂေးအန်ဂျယ်ကိုသူ၏ရုပ်မြင်သံကြားအခန်းကဏ္ for အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည် အဆိုပါ Duke စီးရီး၌တည်၏ ရင်သားမရှိဘဲပရဒိသုမရှိပါဘယ်မှာလဲ မိမိအကြီးမြတ်အလုပ်နှင့်ကြက်သရေအယူခံဝင်ဘို့ကျော်ကြားမှုမှထခဲ့သည်။ သူသည်စပိန်ရုပ်ရှင်များကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် မင်္ဂလာဆောင် ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကင်းမြီးကောက်နှင့်ကဲ့သို့သောအမေရိကန်ဇုန်အတွက်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် Zhao နှင့် o ရောင်ပြန်ဟပ်.
ဒီ ၃၄ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး သူဟာကျော်ကြားမှုရှိတဲ့တီဗီအလုပ်များစွာကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူကရုပ်မြင်သံကြားမှာကြော်ငြာတွေကိုစတင်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေသရုပ်ဆောင်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်ကန်ထရိုက်များနှင့်အလုပ်များမရပ်မနားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သူ့ကိုတူသောကျော်ကြားရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် နှင်းထဲမှာအုန်းပင် o ကောင်းကင်ဘုံသည်အထက်သုံးခြေလှမ်းများ.
သူသည်ဗြိတိသျှသရုပ်ဆောင်နှင့်မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Grey က၏အရိပ်ငါးဆယ်. သူသည်လှပသော၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောယောက်ျားလေးအပြုအမူအတွက်ကျော်ကြားလာခဲ့သည် သူက၏အခန်းကဏ္withကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကို hypnotized ကတည်းက sexy ကောင်လေးနှင့်သန်းကြွယ်သူဌေး။ သူ့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလူတစ်ယောက်၏ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကဲ့သို့စင်မြင့်ပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် Jadotville ၏ဝိုင်းထားခြင်း o စတင်ခြင်းအဆုံးသတ်
ဤသည်စကော့တလန်သရုပ်ဆောင်ပြီးပြည့်စုံသောနှလုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် သူ၏အနှစ် ၅၀ နှင့်အတူသူသည်ကိလေသာတိုးပွားစေခဲ့သည်။ သူ၏အပြာရောင်မျက်လုံးများနှင့်သူ၏အင်္ဂါရပ်များကသူအားသူ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုပေးသည်၊ သူဟာစစ်မှန်တဲ့ Full-Blown သရုပ်ဆောင်နှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုကျော်ကြားသောရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ အဲဂုတ္တုဘုရားများ၊, ဘုရားသခင့်စစ်သား y အိမ်ဖြူတော်ကိုတိုက်ခိုက်ပါ။
ဒီအမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မှာအရာအားလုံးရှိတယ်။ အသက် ၃၂ ​​နှစ်အရွယ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့အိပ်မက်တွေကိုမတည်ငြိမ်စေအောင်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သူသည်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏တိုတောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်သူ၌မရေမတွက်နိုင်သောစီမံကိန်းများရှိသည် ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်အပါအဝင်, အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရုပ်ရှင်များတွင်ကြည့်ရှုလိုသည်များကိုပြသသည် ငါရှာတွေ့တဲ့အချိန် o ချာလီစိန့်တိမ်တိုက်။
ဘယ်မှညာသို့: Jamie Dornan, Gerard Butler နှင့် Zac Efron ။
Superman အသစ်၊ သရုပ်ဆောင်ကောင်း၊ မမြင်နိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်လူသိများသည်။ သူ၏အပြာရောင်မျက်လုံးများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ဆံပင်အနက်ရောင်နှင့်ကွာခြားခြင်းနှင့်သူ့ကိုမိန်းမများစွာအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ သူ့ကိုသိသောသူတို့သည်သူ့ကိုဖော်ပြကြသည် ကြီးမြတ်တဲ့လူကြီးလူကောင်းနှင့်ဗြိတိသျှဟာသ, သူ၏ကြွက်သားကိုယ်ထည်ကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံရသည်။ ကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် မသေနိုင်သော သို့မဟုတ် Monte Cristo ၏အရေအတွက်.
သူသည်အလွန်တောက်ပသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုရှိသည့်အတွက်ဤသရုပ်ဆောင်သည်စွယ်စုံဖြစ်သည် တီးဝိုင်း၏သရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော်, ဂစ်တာသမား, စန္ဒယားနှင့်အခြားတီးဝိုင်း၏သီချင်းရေးသူ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို 30 စက္ကန့်။ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်အပြစ်မဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး၏မျက်နှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သောကြောင့်သူ၏အသက်သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် မစ္စတာဘယ်သူမှ၏ဖြစ်နိုင်သောဘဝ o အိပ်မက်တစ်ခုအတွက် Requiem ။
ဘယ်မှညာသို့: Henry Cayill၊ ယာရက်လက်တိုနှင့် Kit Harington ။
၎င်း၏အယူခံဝင်ငြင်းငြင်းသည်နှင့်ကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ in အတွက်မြှုပ်ကဲ့သို့ထသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Jon Snow ၏ကျော်ကြားစီးရီး၌တည်၏ ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ။ အကယ်၍ သူ့အားလက်တွေ့ဘ ၀ ၌စကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်လျှင်သူ၏သူငယ်ချင်းများကသူ့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီရန်မပျက်ကွက်ကြပါ အတွင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းတွင် ပို၍ ချောမောသောလူ၊ ဤအရာအားလုံးကိုပြောသောနူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ ရိုးသားမှုနှင့်သံလိုက်အမြင်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီခမ်းနားတဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ညွှန်းမှာပါတဲ့သူရဲ့ဇာတ်ညွှန်းအပြင်သူ့ကိုရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ် နှစ်ဆဝိသေသလက္ခဏာ o လူငယ်ဓမ္မ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » ချောမောသရုပ်ဆောင်များကို